Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ maka Ụlọ Nzukọ China Manufacturer
Home > Ngwaahịa > Ebube Ndị Na-ahụ Maka Ụlọ Ahịa > Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ na ụlọ ọrụ > Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ maka Ụlọ Nzukọ
Ihe Nlereanya.: HN-45W-02-OL
Site n'enye ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ dị elu, ụlọ ọrụ ndị nwe ụlọ na-eduzi ọkwọ ụgbọala bụ ihe ngwọta zuru oke maka ntọala obibi na azụmahịa. Ntube igbe ntinye ya nwere nkpu ígwè (nhazi nke nchekwa 2 nke klas) nke dabara maka UL Standard panel 45W ( 36V Constant Current Led Driver ). Ọ bụ ezie na ọkụ arụmọrụ dị elu, ìhè ọkụ ahụ siri ike, na-enye obi ụtọ, ọbụna ìhè nke a pụrụ iji maka nri nri ọzọ gị ma ọ bụ nnọkọ ọrụ.
Ezubere maka ụlọ ọrụ nke oge a, n'ime ime na n'èzí, ndị ọkwọ ụgbọala na-eduzi na-egosipụta nhọrọ dị iche iche nke ọkụ ọkụ a na-eji achọpụta na usoro mgbanwe na nke oge a. Achịkọta ndị ọkwọ ụgbọala na-emepụta site na ntinye aka anyị, ụlọ ọrụ ọkụ na-ejikọta ọnụ nke gbara gburugburu ruo ihe karịrị afọ 9.
Max. Mgbapụta mmepụta: 45W
Max. Mmepụta ugbu a: 1100mA
Encironment / IP Rating: Ime ụlọ / IP20
HN45W-02, ígwè nke ọkwọ ụgbọala 45W onye ọkwọ ụgbọala na-agbanwe agbanwe mgbe niile , Flicker free 0 / 1-10V / PWM / RX dimming, Ntọala maka nnukwu lumen Mgba ọkụ na-acha ọkụ na ọkụ ọkụ. Ọkwọ ụgbọala na-ahụ maka ume. Ejiri ígwè mee ihe owuwu ya, ntinye onwe ya maka usoro njikọ njikọta, nke kwesịrị ekwesị maka ahịa ndị Europe & Ugwu North America.
Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ụlọ Ọrụ Na-eduzi High Driver Bay Kpọtụrụ ugbu a
UL Constant Ugbu a Dimmable LED Linear Driver Kpọtụrụ ugbu a
Ọkwọ ụgbọala a na-ere n'ahịa Kpọtụrụ ugbu a
Mmiri na-ere mmiri na-emepụta ihe ọkụkụ na-emepụta ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ dị ka 80W Kpọtụrụ ugbu a